induction ọkụ na-ekpo ọkụ na-agbagharị na IGBT Ngwunye ọkụ
Home / ngwa / Ọkụ na-egbuke egbuke / ntinye ọkụ na-ekpo ọkụ
induction ọkụ ọkụ na-agbagharị
Category: Ọkụ na-egbuke egbuke Tags: kpo oku na-ekpo oku, mpịgharị ọkụ na-ekpo ọkụ ugboro ugboro, ọkụ na-atụgharị, na-ekpo ọkụ na-akpali akpali, igwe na-ekpo ọkụ na-efegharị, induction ọkụ ọkụ na-agbagharị, ntinye ọkụ na-agba ọkụ, RF na - ekpo oku na - ekpo oku
induction ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ na usoro IGBT na-ekpo ọkụ ọkụ
Ebumnuche Iji kpoo okirikiri plow discs n'ihu ọkụ Rolling (ịmụba) usoro
Ihe Ewepụghị Boron ígwè discs, OD 460 na 710 mm (18 na 28 ") ọkpụrụkpụ 3.2 ka 10 mm (8/64 na 25/64")
Okpomọkụ 725 ° C 1335 ° F
75 kHz ugboro ugboro
Akụrụngwa DW-HF-120 kW ntinye ọkụ ọkụ site na iji isi ọrụ 2, sistemụ ịgbanwee, 4 akpadoro ahaziri iche, usoro chiller
Usoro Na sistemụ PLC, nke ọ bụla n'ime igwe na-agagharị abụọ nwere isi ọrụ dịpụrụ adịpụ yana yana ikpo okwu na-agagharị ebe diski na-ejide ya na ntanetị ma na-ejide ya site na etiti
efere 100 mm obere na diski dayameta. A na-etinye eriri igwe kpo oku 250 mm (10 ”) n’elu agụba ahụ, na-agagharị n’ihu nrụgide na-aga. Nke a na-ekpuchi ihu diski ahụ dum.
Mgbe sekọnd ole na ole nke kpo oku, ọnụ ya ruru okpomọkụ achọrọ ma mee diski ka ọ gbanwee na 30 rpm. Nrụgide ahụ na-apụta nso, na-akpụ profaịlụ dị nkọ. A na-enweta njedebe ikpeazụ mgbe ntụgharị abụọ nke diski ahụ gasịrị.
Nsonaazụ / Uru Induction kpo oku na-enye usoro a na-eme ngwa ngwa karịa iji atụgharị-atụgharị; a na-enweta profaịlụ achọrọ mgbe sekọnd ole na ole, jiri ya tụnyere nkeji ole na ole. Ọkpụkpụ igwe dị mma nke ngwụcha dị elu karịa, ebe usoro ahụ na-eme ka ihe ahụ sie ike.
Ngwá ọrụ na usoro ahụ na-enyefe onwe ha na igwe na-arụ ọrụ robotic
Ngwunye na-agba chaa chaa
Ngwunye na-ekpo ọkụ n'ime ụlọ nchara ígwè